Unoda gweta remhuri ndiani achakubatsira iwe pachako?
Dzimwe nguva iwe ungatofanira kugadzirisa nenyaya yepamutemo mumunda wemutemo wemhuri. Nyaya inowanzoitika pamutemo mumhuri tsika ndeye kurambana. Ruzivo rwakawanda pamusoro pemafambiro ekurambana uye magweta edu ekurambana anogona kuwanikwa papeji redu rekurambana. Pamusoro pekurambana, iwe unogona zvakare kufunga nezve, semuenzaniso, kuzivikanwa kwemwana wako, kuramba kwekuva mubereki, kuwana vana vekuchengeta kana maitiro ekurera…
MHURI DZEMHARAI AT LAW & MORE
UNGAVADA KUTI VATSVIRE? IZVI ZVINOGONESA US
Dzimwe nguva iwe ungatofanira kugadzirisa nenyaya yepamutemo mumunda wemutemo wemhuri. Nyaya inowanzoitika pamutemo mumhuri tsika ndeye kurambana.
> Kurambwa kwekuva mubereki
Ruzivo rwakawanda pamusoro pemafambiro ekurambana uye magweta edu ekurambana anogona kuwanikwa papeji redu rekurambana. Pamusoro pekurambana, iwe unogona zvakare kufunga nezve, semuenzaniso, kuzivikanwa kwemwana wako, kuramba kwekuva mubereki, kuwana kuchengetwa kwevana vako kana maitiro ekurera. Idzi ndidzo nyaya dzinoda kurongeka zvakanaka kuitira kuti iwe usazotarisana nematambudziko gare gare. Uri kutsvaga kambani yemutemo yakasarudzika mumutemo wemhuri? Wobva wawana nzvimbo chaiyo. Law & More inokupa iwe rubatsiro rwemutemo mundima yemutemo wemhuri. Magweta emhuri emhuri ari pabasa rako nezano revanhu.
Pamusoro pezvematambudziko ane chekuita nekubvuma, kuchengetwa, kuramba kwekuva mubereki nekutorerwa vana, magweta emutemo wemhuri anogona zvakare kukubatsira nemabatiro ane chekuita nekuburitswa nekutarisirwa kwevana vako. Kana iwe uri kubata neyakadai kana dzakawanda zvezvinhu izvi, zvine hungwaru kuve nerubatsiro rwemutemo wemhuri yemhuri uyo achakubatsira iwe kugadzirisa kwepamutemo.
Kubvuma kunogadzira mutemo wemhuri hukama pakati pemunhu anobvuma mwana nemwana. Iye murume anogona kuzonzi baba, mukadzi ave amai. Munhu anobvuma mwana haafanire kuve baba wekubereka kana amai vemwana. Iwe unogona kugamuchira mwana wako mwana asati aberekwa, panguva yekuzivisa kana kuberekwa kana imwe nguva yekumberi.
Mukuda kwegweta remhuri?
Mamiriro ekugamuchira mwana
Kana iwe uchida kubvuma mwana, iwe unofanirwa kuzadzisa zvishoma mamiriro. Semuenzaniso, iwe unofanirwa kunge uine makore gumi nematanhatu kana anodarika kuti ubvume mwana. Asi kune mamwe mamiriro. Unoda mvumo kubva kuna mai. Kunze kwekunge mwana akura kupfuura makore gumi nematanhatu. Kana mwana aine makore gumi nemaviri kana kupfuura, iwe unodawo mvumo yakanyorwa kubva kumwana. Pamusoro pezvo, haugone kubvuma mwana kana iwe usingatenderwe kuroora amai. Semuenzaniso, nekuti uri hama yeropa raamai. Uyezve, mwana waunoda kubvuma anogona kunge asati atova nevabereki vaviri vepamutemo. Iwe unoiswa pasi pekuchengetedza? Pakadaro, unotanga kuda mvumo kubva kudare redunhu.
Kubvuma mwana panguva yekuzvitakura
Izvi zvinoreva kubvuma kwemucheche asati aberekwa. Iwe unogona kugamuchira mwana mune chero maseru muNetherlands. Kana amai (vanotarisira) vasingauye newe, vanofanirwa kupa mvumo yakanyorwa yekubvuma. Mumwe wako ane nhumbu nemapatya here? Ipapo kubvuma kunoshanda kune vese vana avo mumwe wako waakabata nemimba panguva iyoyo.
Kubvuma mwana panguva yekuzivisa kuberekwa
Iwe unogona zvakare kubvuma mwana wako kana ukashuma kuberekwa. Iwe unofanirwa kutaurira kuberekwa kudunhu rakazvarwa mwana. Kana amai vacho vasina kuuya newe, vanofanirwa kupa mvumo yakanyorwa yekubvuma.
Kubvuma mwana panguva inotevera
Zvinoitikawo dzimwe nguva kuti vana havagamuchirwi kusvikira vakura kwazvo kana kutokura. Kubvuma kwacho kunozogoneka mumatunhu ese muNetherlands. Kubva pamakore gumi nemaviri iwe uchazoda mvumo yakanyorwa kubva kumwana naamai. Kana mwana atove nemakore gumi nematanhatu iwe unongoda mvumo kubva kumwana.
Kusarudza zita kana uchigamuchira mwana
Chinhu chakakosha mukubvuma kwemwana wako, kusarudzwa kwezita. Kana iwe uchida kusarudza surname yemwana wako panguva yekubvuma, iwe nemumwe wako munofanirwa kuenda kudhorobha pamwe chete. Kana mwana aine makore anopfuura gumi nematanhatu panguva yekubvuma, mwana achasarudza surname yaanoda kuva nayo.
Kana iwe uchibvuma mwana, iwe unova mubereki wepamutemo wemwana. Iwe unozove uine kodzero shoma uye zvisungo. Kuti uve mumiriri wemutemo wemwana, iwe unofanirwa kunyorera zvakare kwechiremera chevabereki. Kubvumwa kwemwana zvinoreva zvinotevera:
• Chisungo chepamutemo chinogadzirwa pakati pemunhu anobvuma mwana nemwana.
• Une chisungo chekuchengeta kumwana kusvika asvitsa makore makumi maviri nemasere.
• Iwe nemwana muve vagari venhaka vepamutemo.
• Iwe unosarudza mazita emwana pamwe chete naamai panguva yekubvuma.
• Mwana anogona kuwana hunhu hwako. Izvi zvinoenderana nemutemo wenyika iyo iwe uri wenyika.
Iwe ungade kubvuma mwana wako uye uchine mibvunzo nezve nzira yekubvuma? Inzwa wakasununguka kubata edu ane ruzivo emhuri emutemo magweta.
Kurambwa kwekuva mubereki
Kana mai vemwana varoora, murume wavo anova baba vemwana. Izvi zvinoshandawo kushandira pamwe kunyoreswa. Izvo zvinokwanisika kuramba kuve mubereki. Semuenzaniso, nekuti mukadzi / mukadzi haazi baba wekubereka wemwana. Kuramba kuve mubereki kunogona kukumbirwa nababa, amai kana nemwana pachako. Kuramba kune mhedzisiro yekuti mutemo hautarise baba vepamutemo sababa. Izvi zvinoshanda retroactively. Mutemo unofungidzira kuti baba vepamutemo baba havana kumbobvira varipo. Izvi zvine semuenzaniso mhedzisiro kune uyo mudyi wenhaka.
Nekudaro, pane zviitiko zvitatu umo kurambwa kwekuva mubereki hakugoneki (kana kusakwanazve) zvichibvira:
• Kana baba vepamutemo vari zvakare baba vekubereka vemwana;
• Kana baba vepamutemo vakatendera chiitiko chakaitwa nemukadzi wavo nemimba;
• Kana baba vepamutemo vakatoziva pamberi pemuchato kuti mukadzi wavo wavakazotevera ave nemimba.
• Kusarudzika kunoitwa kumatare maviri ekupedzisira apo amai vanga vasina kutendeseka nezva baba vekubereka.
Kurambwa kwekuva mubereki kuchiri chisarudzo chakakosha. Magweta emhuri a Law & More vakagadzirira kukuyambira nenzira yakanakisa usati waita iyi sarudzo yakakosha.
Mwana ari undererage haatenderwi kuita mamwe sarudzo ega. Ndokusaka mwana ari pasi pesimba remumwe kana vaviri vabereki. Kazhinji, vabereki vanobva vangochengetwa nevana vavo, asi dzimwe nguva unofanirwa kunyorera kuchengetedzwa kuburikidza nedare kana nenzira yekunyorera.
Kana uine kuchengetedza mwana:
• Iwe unozvidavirira pakuchengeta uye kurera mwana.
• Iwe unowanzogara uine chisungo chekuchengetedza, izvo zvinoreva kuti iwe unofanirwa kubhadhara mutengo wekutarisira uye dzidzo (kusvika zera ramakore gumi nemasere) nemitengo yekugara uye kudzidza (kubva pazera ramakore gumi nemasere kusvika makumi maviri nemasere).
• Unotonga mari yemwana uye zvinhu;
Ndiwe mumiriri wake wepamutemo.
Kuchengetwa kwemwana kunogona kurongeka nenzira mbiri. Kana munhu mumwe achinge achengetwa, tinotaura nezvekuchengetwa kwemusoro mumwe, uye kana vanhu vaviri vakachengetedzwa, zvine chekuita nechengetedzo pamwechete. Vaviri vevanhu vanokwana vanogona kuchengetwa. Naizvozvo, haugone kukumbira simba revabereki kana vanhu vaviri vatove nemwana.
Unochengeta riini mwana?
Wakaroora kana kuti une mubatanidzwa wakanyoreswa? Ipapo vaviri vabereki vanozove pamwe nekuchengeta pamwe kwemwana. Kana asiriiwo mamiriro ezvinhu, mai chete ndivo vanozopihwa kuchengetedzwa. Unoroora sevabereki mushure mekuzvarwa kwemwana wako here? Kana iwe unopinda mumubatanidzwa wakanyoreswa? Mumamiriro ezvinhu akadaro, iwe zvakare uchagamuchira pakarepo otomatiki masimba evabereki. Chimiro ndechekuti wabvuma mwana sababa. Kuti uwane chiremera chevabereki, iwe unogona kunge usiri mudiki pane makore gumi nemasere, uve pasi pekuchengetedza kana uine chirwere chepfungwa. Amai vekuseri kwemakore gumi nematanhatu kana gumi nemaviri ekuberekwa vanogona kunyorera kudare kuziviswa kwezera rekuwana mwana. Kana pasina wevabereki akachengetwa, mutongi anogadza muchengeti.
Kuchengetwa kwakabatana kana kuri kurambana
Pfungwa iripo pakurambana ndeyekuti vaviri vabereki vanochengeta pamwe chete. Mune zvimwe zviitiko, dare rinogona kubva pamutemo uyu kana riri rakanakira vana.
Iwe unoshuva here kuchengetwa pamusoro pemwana wako kana iwe uine mimwe mibvunzo maererano nemvumo yevabereki? Ipapo ndokumbirawo ubvunze mumwe weagweta emhuri ane ruzivo. Isu tinofara kufunga pamwe chete newe uye nekukubatsira iwe nekushandisa iko kwechiremera chevabereki!
Chero ani anoda kutora mwana kubva kuNetherlands kana kubva kunze kwenyika anofanira kusangana nemimwe mamiriro. Semuenzaniso, iwe unofanirwa kunge uine makore gumi nemasere kupfuura iye mwana waunoda kubereka. Mamiriro ekutora mwana kubva kuNetherlands anosiyana nemamiriro ezvinhu ekurera mwana kubva kunze. Semuenzaniso, kugamuchirwa muNetherlands kunoda kuti kuvepo kuri pakanakira mwana. Mukuwedzera, mwana anofanira kunge ari mudiki. Kana mwana waunoda kubereka aine makore gumi nemaviri kana kupfuura, mvumo yake inodikanwa kuti aberekwe. Uye zvakare, chakakosha mamiriro ekugamuchirwa kwemwana kubva kuNetherlands ndechekuti iwe wakachengeta nekurera mwana kweinenge gore rimwe. Semuenzaniso semubereki wekurera, muchengeti kana mubereki wekurera.
Nekugamuchira mwana kubva kunze kwenyika, zvakakosha kuti iwe hausati wasvitsa makore makumi mana nemashanu. Kana pane mamiriro ezvinhu akakosha, kunze kunogona kuitwa. Uyezve, iwo mamiriro anotevera anoshanda pakugamuchirwa kwemwana kubva kunze kwenyika:
• Iwe nemumwe wako munofanirwa kupa mvumo yekuongorora iyo Judicial Documentation System (JDS).
• Musiyano wezera pakati pemubereki wekare wekurera nemwana haugone kupfuura makumi mana emakore. Mune mamiriro ezvinhu akakosha, kusiana kunogona kuitwawo.
• Hutano hwako hunogona kunge husiri chipingamupinyi pakugamuchirwa. Iwe unofanirwa kuongororwa nezvechiremba.
• Iwe unofanirwa kugara muNetherlands.
• Kubva panguva yekuenda kwevatorwa mwana kuNetherlands, unosungirwa kupa mari yekuchengeta nekurera mwana.
Nyika iyo mwana anobva kwaari inogona zvakare kuganhurira mamiriro ezvinhu ekurera. Semuenzaniso, nezve hutano hwako, zera kana mari yaunotambira. Muchokwadi, murume nemukadzi vanogona kungotora mwana kubva kunze kwenyika pamwe chete kana vakaroora.
Iwe unoda here kutora mwana kubva kuNetherlands kana kubva kunze kwenyika? Kana zvirizvo, ziviswa kwazvo nezve maitirwo uye mamiriro chaiwo ayo anoshanda kune yako mamiriro. Iwo emhuri emutemo magweta a Law & More vakagadzirira kuraira uye kukubatsira iwe panguva ino maitiro.
Kuisirwa nzvimbo kwakanyanya idanho. Inogona kushandiswa kana zvichinge zviri nani kuchengetedzwa kwemwana wako kuti agare kumwe kunhu kwechinguva. Kuburitswa kunogara kuchifambidzana. Chinangwa chekudzingwa ndechekuti mwana wako agare pamba zvakare mushure menguva yakati rebei.
Chikumbiro chekuisa mwana wako kunze kwemusha chinogona kuendeswa kuMutongi weVana nevechidiki Care kana neChikoro Chekuchengetedza Nevadziviriri. Kune akasiyana siyana mafomu ekuparadzwa. Semuenzaniso, mwana wako anogona kuiswa mumhuri yekurera kana imba yekuchengeta. Izvo zvakare zvinoita kuti mwana wako aiswe pamwe nemhuri.
Mumamiriro ezvinhu akadaro, zvakakosha kuti iwe unogona kuhaya gweta raunovimba naro. At Law & More, zvaunofarira uye izvo zvemwana wako zvakanyanya. Kana iwe uchida rubatsiro muchiitwa ichi, semuenzaniso kudzivirira mwana wako kuiswa kure kubva kumba, iwe wauya kunzvimbo chaiyo. Magweta edu anogona kukubatsira iwe nemwana wako kana chikumbiro chekubuditswa pasi chaendeswa, kana kuti chingaendeswa, kumutongi wevana.
Iwo emhuri emutemo magweta a Law & More inogona kutungamira uye kukubatsira kuronga zvese zvikamu zvemutemo wemhuri nenzira yakanyanya kunaka. Magweta edu akasarudzika ruzivo mumunda wemutemo wemhuri. Uri kuda kuziva kuti chii chatinogona kukuitira? Wobva waita kuti ubate Law & More.